राष्ट्रपति रामवरण यादवले राजीनामा नदिने - inaruwaonline.com
राष्ट्रपति रामवरण यादवले राजीनामा नदिने
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक १०, २०७२ समय: ८:२९:४३
१० कात्तिक, काठमाडौं । नयाँ राष्ट्रपति चयन प्रक्रिया सुरु भैसके पनि बहालवाला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राजीनामा नदिने भएका छन् । यादवले नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि मात्रै शीतल निवास छाड्ने छन् ।
‘अन्तराष्ट्रिय प्रचलन एवं रिप्लेसमेन्टको सिद्धान्तअनुसार राजीनामा दिइरहनु पर्दैन,’ राष्ट्रपति डा. यादवका कानुनी सल्लाहकार ललितबहादुर बस्नेतले भने, ‘अमेरिकामा पनि राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्दैनन्, नयाँबाट रिप्लेसमेन्ट हुन्छ ।’
नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि डा. यादव स्वतः प्रतिस्थापित हुनेछन् । नयाँ संविधान र कानुनमा राष्ट्रपतिले कस्लाई राजीनामा बुझाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन । तर, सपथ भने प्रधानन्यायाधीशबाट लिने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिलाई विदा गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा पनि अझै स्पष्ट भैसकेको छैन । स्रोतका अनुसार स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भैसकेपछि डा. यादवले प्रेस वक्तव्य निकालेर शीतल निवास छाड्नेछन् ।
नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी, कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङ र नेमकिपाका नारायण महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।अनलाइनखबरबाट